‘केपी ओलीको आदेश अब कसैले मान्दैन, प्रधानमन्त्रीबाट सर्लक्क पन्छिनुपर्छ’
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मंसिर १७ गते पक्राउ परे। तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न गएका पौडेलको कार्यक्रम बिथोल्ने गरी निषेधाज्ञा र गिरफ्तार गरेपछि कांग्रेस आन्दोलित भयो। त्यसपछि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस चरणबद्ध आन्दोलनमा छ। सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परेको मुद्दा किनारा लागेको छैन। यसै राजनीतिक सरगर्मीका बीचमा नेपाली कांग्रेसको आगामी रणनीति, शीर्ष नेताहरूमा देखिएको विवाद लगायतका विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानीः
तनहुँमा तपाईलाई धरपकड भयो। निषेधाज्ञा जारी गरेर गिरफ्तारी पनि भयो। कम्युनिष्ट सरकारको आँखामा कांग्रेसभित्र पनि तपाई चाहिँ बढी तारो बन्नुभएको हो?
–खै! त्यस्तो त हुनु नपर्ने हो।
तनहुँमा तपाईमाथिको धरपकडपछि कांग्रेस चलायमानजस्तो भयो, सरकारी दमन तपाईमाथि अलि धेरै भएको हो कि?
–त्यो त मैले उनीहरुको मति भ्रष्ट भएको भनेर बुझेको छु। निषेधाज्ञा जारी गर्नै नपर्ने ठाउँमा जारी गरियो। हामी सबैले मिलेर बनाएको पुल थियो। उपभोक्ता समितिले आइदिनुस् भनेर बोलाउनु भयो। त्यहाँको नगरपालिका, वडाले मलाई बोलाएको हो। म उद्घाटन गर्न जाँदा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्‍याे। त्यो निषेधाज्ञालाई मैले मान्न मिलेन। सरकारले कानून हातमा लिन पाइन्छ? मैले यो ठिक छैन खारेज गरौं भने। अब उनीहरूले पुलिस लगाए। जबरजस्ती गरे। मलाई थुनामा लगे। यो सरकारको बुद्धि बिग्रिएकै हो।
नेकपाभित्रको झगडाले देशलाई अस्थिरतातर्फ लग्यो भनिन्छ। संसद् विघटनपछि कांग्रेसको दुई चरित्र देखियो। एकातिर आन्दोलनमा जाने अर्कातिर अदालतको निर्णय मान्छौं भन्ने। तपाई आन्दोलनको पक्षमा, अनि सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई मौन समर्थन, किन यस्तो भएको हो?
–हैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरे। राष्ट्रपतिलाई सदर नगर्नुस् भन्दाभन्दै उहाँले सदर गर्नुभयो। ठाडै विधान मिचेको देख्दादेख्दै लोकतन्त्रको पहरेदार कांग्रेसले विरोध नगरी बस्न हुँदैन। हामीले विरोध गर्‍याैं। केही साथीहरूले यसो भनेर म भन्दिनँ। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निर्णय हो, संविधानको धारा हेर्नु पर्दैन भनेर धम्क्याउने, प्रतिपक्षी दलले अदालतले जे गरोस्–गरोस्–भनेर कांग्रेस चुप लागेर बस्न हुँदैन।
नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै यो संविधान विपरीत छ, अलोकतान्त्रिक छ भनेर वडासम्म विरोधका कार्यक्रम गरेकै हो। भातृ संस्थाहरू सबै निरन्तर विरोधमा नै छन्। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। हाम्रो भनाइ के मात्र हो भने, संविधान हामीले बनाएका हौं। देशमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएर राजनीतिक अस्थितरता भयो। देशले उन्नति गर्ने अवसर पाएन भनेर संविधानमा विघटनको अधिकार नै नराखेको हो। संसद् विघटन गर्ने अधिकारको दुरुपयोग भयो। र, मुलुक समृद्धितिर लम्किएन, अस्थिरता भयो भनेर त्यो अधिकार संविधानमा नराखिएको हो।
तर, देशको प्रधानमन्त्रीले संविधान मान्न नपर्ने, राष्ट्रपतिले मान्न नपर्ने, अदालतलाई धम्की दिएर संविधान मान्न नदिने हो भने संविधानको पालना कसले गर्छ? त्यही भएर हामीले संविधान मिचिएको छ भनेका हौं। प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न थाले। त्यसकारण हामीले सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले विधान हेरेर न्याय गर्नुहोला भनेका हौं। हामी पनि पीडित पक्ष हौं। पीडित पक्षले न्याय माग्छ नि!
संसद् विघटनको विरोध गर्ने भनिए पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वपंक्ति एक भएर लागेन नि यसमा, किन?
–शेरबहादुरजी नरम हुनु उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। पार्टीले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेर यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेर यसको विरोध गर्ने भनिसकेका छौं। हाम्रो माग संसद् पुनःस्थापना नै हो। पार्टीले जे निर्णय गर्‍यो म त्यही बोलिरहेको छु। पार्टीको निर्णय लिएर म देशभर गइरहेको छु।
पछिल्लो समय रामचन्द्र पौडेलले पनि सर्वोच्चको निर्णय पर्खिनुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाकै लयमा लय मिलाउनुभयो भन्ने आरोप लागेको छ, के भन्नुहुन्छ?
–पर्खिनुपर्छ, मैले भनेको होइन। मलाई विश्वास छ, अदालतले संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने छैन। न्यायमूर्तिहरूले पनि यही संविधानलाई हेर्ने त हो नि। लिखित संविधानमा छ नि हामीसँग। लिखित अक्षरहरु छन्। त्यसका अर्थहरू छन्। त्यो अर्थ हामीले सबैले बुझ्ने एउटै हो।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त संघर्षमा जान्छौं भन्नुभएको छ। संयुक्त आन्दोलनमा जाने तयारीमा हो कांग्रेस?
–मेरो एउटै कुरा के छ भने संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता परिसकेको छैन अहिले। अदालतलाई हेर्नै बाँकि छ। अदालतको निर्णय आउनै बाँकि छ। त्यतिञ्जेल संयुक्त संघर्षमा गइराख्नै पर्दैन। अहिले हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट वकालत गर्ने हो। बहस भइरहेको छ।
जनआन्दोलनकै आवश्यकता भयो? कांग्रेस छिटो आइदिनु पर्‍यो भनेर प्रचण्डले अपिल गरेको गरै हुनुहुन्छ नि!
–उहाँ (प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल)हरू अलि हतारिनु भएको हो। उहाँहरूजस्तो हतारिने म होइन। म त यही भन्छु– अदालतका न्यायमूर्तिहरूले संविधान हेरेरै निर्णय गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीको कुरा नै कानून मान्नु हुने छैन। प्रधानमन्त्रीले बोलेको ‘संविधान’ उहाँहरूले मान्नु हुने छैन। हामीले त्यो वकालत गर्न खोजेको हो। हामीले दबाब दिन खाजेको हैन, ध्यानाकर्षण गराउन मात्र खोजेको हो। पछि आवश्यकता पर्छ होला। तर, अहिले प्रचण्डले भनेजस्तै संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता परिसकेको छैन।
अब देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो होला भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। संसद् पुनःस्थापना भयो भने देशले निकास पाउँछ भनेर कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ?
–यो घटनाबाट म पनि चिन्तित छु। नेपालीहरू चिन्तित छौं। संविधान बनाएर स्थिरतातिर लम्किन खोजिएको बेला त्यसलाई बिथोल्न खोजियो। यसबाट देशलाई कता लान खोजियो? दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रको विवादले संसद्लाई तारो बनाउनु होइन। संसद्मा कुनै प्रस्ताव फेल भएको थिएन। देशलाई खल्बलाएर विग्रहको भुमरीमा धकेल्न षड्यन्त्र भइरहेको हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्नुपर्ने कारण र तर्क सुन्नुभएको होला, के भन्नु हुन्छ यसमा?
–सुनेको छु। बोल्दै गर्दा उहाँ (केपी ओली)का ओठ र तालु सुकिसकेका छन्। बहस गर्दैगर्दा उहाँका वकिलहरूको पनि ओठ सुकेका छन्। उहाँका भनाइमा वजन छैन। प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुने निश्चित जस्तै भइसकेको छ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाले राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने के आधार छ?
–संसद्मा नेकपाको संसदील दल विभाजित हुने निश्चित हुन्छ। ९० जनाले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गरेका छन्। उनीहरू यो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछन्। त्यहाँ मतदान हुन्छ। त्यतिबेला कांग्रेसले जे निर्णय गर्‍यो, त्यही हुन्छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेको भूमिका अगाडि आउँछ। सत्ता राजनीतिको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको लागि एक अवसर आउँछ। कांग्रेसमा जो साथीहरू छन्। म त बाहिर छु। कांग्रेसलाई निर्णायक हुने अवसर आउने छ। कांग्रेस जता लाग्छ, त्यतै सरकार बन्छ। कांग्रेसको शर्तमा सरकार बन्छ। कांग्रेसले विधि पुर्‍याएर निष्पक्ष तरिकाले देशलाई चुनावमा लान्छ।
सर्वोच्चले सरकारको कदम अनुमोदन गरिदियो भने कांग्रेस के गर्छ?
–कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्छ। म त प्रश्न गर्छु, यो देशमा न्याय छ कि छैन? यो देशमा संविधान छ कि छैन? संविधानका अक्षरहरू हेरेर व्याख्या गर्ने न्यायमूर्ति छन् कि छैनन्? यी प्रश्नले कस्तो परिस्थिति ल्याउँछ, म त्यसका लागि तयार छु। अरु पनि तयार हुनुपर्छ।
त्यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस चुनावमा जान्छ कि जाँदैन?
–कांग्रेसले के गर्ला, निर्वाचन होला नहोला। निर्वाचन हुने सहज वातावरण बनेमा र सिंगो कांग्रेस सहमत भएमा के होला त्यो अर्को कुरा हो। त्यो परिस्थितिको कल्पना म गर्न सक्दिनँ। यो सम्भावना छैन। यो हुनु हुँदैन।
ओली सरकारले सत्ताको लोभ देखाएर कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वलाई अल्मलाएको छ भनिन्छ। सुविधा र भागबण्डाको विषय मिलाएर ओलीले कांग्रेसलाई आफूतिर तान्न खोजेको भनिएको छ। संवैधानिक निकायमा कांग्रेसको भागबाट भएका नियुक्तिले पनि यस्तो पुष्टि गरेको छ, आखिर किन?
–नेतृत्वसँग मेरो मतभेद त्यहाँनेर हुन्थ्यो। अध्यादेश अवैधानिक हो। पार्टीले निर्णय नै गरेको थियो। त्यो अध्यादेशमा हाम्रो पार्टीको सहभागिता हुन सक्दैन। त्यहाँ कोही सहभागी भएमा त्यो आपत्तिजनक हो। संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक छ। यो खारेज हुनुपर्छ। यो विषय पनि अदालतमा गएको छ। त्यहाँ पनि खारेज हुनुपर्छ भन्ने मेरो अपिल छ।
पक्षमा होस् वा विपक्षमा होस् सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीका कदमहरू के हुन सक्छन्?
–एक त केपी ओलीले पार्टीभित्रबाटै काम गर्न दिएनन् भन्नुभयो। त्यो बेला उहाँले कि त पार्टी सम्हाल्नुपर्थ्याे। कि त राजीनामा दिनुपर्थ्याे। राजीनामा दिएर जसले सक्छ, उसैलाई चलाउनु भन्नुपर्ने हो। म नभएपछि संसारै भत्किएर जाओस् भन्ने? बेइमानी गर्ने हो त उहाँले? आफू नभएपछि संसार चाहिँदैन भन्ने? ओलीजीले राजीनामा गर्नुपर्थ्याे। अब संसद् पुनःस्थापना भएपछि नैतिकताको आधारमा उहाँले बस्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीबाट सर्लक्क पन्छिनुपर्छ। संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउँछ। उहाँ पन्छिनुभएन भने पनि संसद्ले अविश्वासको मत पारित गरेर उहाँलाई पन्छाउँछ। उहाँ त जसरी पनि बहिर्गमन हुने हो।
केपी ओलीले अर्को निरंकुश कदम चाल्न सक्छन् भन्नेहरू पनि छन्। संकटकाल निम्त्याउँछन् भन्ने गरिन्छ, के लाग्छ तपाईलाई?
–अब त्यो हुँदैन। उहाँको आदेश कोही मान्दैनन् अब देशमा। के उहाँ एक्लै बौलाएर हिँड्नुहुन्छ? अब ओलीले केही गर्न सक्नुहुन्न।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्व एक छैन भनिएको बेला कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? संसद् पुनःस्थापना भए कसरी भूमिका निभाउनु हुन्छ?
–म त संसद्मा छैन। भएका साथीहरूले कांग्रेसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यहाँको संसदीय अभ्यासमा कांग्रेसको भूमिका कहाँ आउँछ, त्यहाँ नै गर्नुहुन्छ।
ओलीको यस कदमको पछाडि नेकपाको किचलो मात्रै कारक हो कि अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जिम्मेवार छन्?
–यस्तो अवस्थामा उहाँ (केपी ओली) किन विघटनतिर जानुभयो? यो गम्भीर प्रश्न हो। नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले मात्रै संसद् फालिएको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि हामी खेलको चक्रब्यूहमा फस्यौं कि, कसैको ग्रान्ड डिजाइन पो हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यसले नेपाललाई विग्रहको भूमरीमा लग्दै छ कि, देशमा के गर्न खोजिएको हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ।
यस्तो संकटका बेला पार्टीले ठोस निर्णय लिनुपर्छ भनेर तपाईले बैठक माग गर्नुभएको छ। कांग्रेस बैठक किन बस्न नसकेको हो?
–मैले बैठक माग गरेको छु, बोलाउने अधिकार सभापतिको हो। उहाँले अलि ढिला गर्नुभएको छ। अहिले पनि म बैठक बोलाइहाल्न आग्रह गर्छु। बसेर छलफल गरौं भन्छु।
कांग्रेस बैठक ढिला हुनुमा कुनै खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ, सत्ताको बार्गेनिङ भइरहेको हो अहिले?
–पार्टीको बैठक बस्नुपर्छ। केही अस्पष्टता छ भने स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले मन्तव्य र गन्तव्य एउटै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। जनताको बीचमा कांग्रेस एक छ भनेर जानुपर्छ। हामी लोकतन्त्रका लागि जन्मिएको पार्टी हो। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस धर्मराउनु हुन्न।
आगामी दिनमा कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर अघि बढ्न खोजेको हो? कि, नेकपाको कुनै एक खेमालाई सहयोग गरेर अघि बढ्छ?
–त्यतिबेलाको परिस्थितिमा हामी छलफल गर्छौं। हामी मात्र पर्याप्त छैनौं। हामीले अरुसँग तालमेल गर्दा कस्तो अवस्था आउँछ त्यसमा भर पर्छ।
#प्रधानमन्त्री #केपी_शर्मा_ओली #नेपाली_कांग्रेस #रामचन्द्र_पौडेल #वरिष्ठ_नेता
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २७, २०७७ १७:१८